ဘဝမှတ်တိုင်: Ultimate Caller ID Screen HD Pro v10.3.3 for Android(latest version)
Ultimate Caller ID Screen HD Pro v10.3.3 for Android(latest version)
ဒီတစ်ခါတော့ Call Screen HD ဆိုတဲ့ Android Application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်လေးပါဘဲ။
ဒီကောင်လေးကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်သလည်းဆိုရင် ဖုန်းခေါ်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပြောရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်လူရဲ့ ပုံကို Screen ပေါ်မှာ အပြည့်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ တစ်ဖက်လူရဲ့ ပုံကိုတော့ Contact မှာထည့်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး ဖုန်းလက်ခံတဲ့အခါမှာ နှိပ်တဲ့ Answer နဲ့ End ကိုလည်း စတိုင်ပြောင်းပြီး ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Call Block Feature ကိုပါထည့်သွင်းထားပါ တယ်ဗျာ။ ဒါတင်ဘဲလားဆိုတော့ မကသေးပါဘူး Phone Call နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားသော Feature များစွာ ကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်နော်။ နမူနာကြည့်နိုင်အောင် Screen Shoot တွေကို အောက်မှာရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။Android O/S : 2.1အထက်ကိုကောင်းကောင်းသုံးလိုရပါတယ်။ ဖိုင်လေးကိုဖြေလိုက်ပြီး install လုပ်ရုံပဲဗျာ။
Ultimate Call Screen HD Free combinesaFullscreen Caller ID replacement, contact picture manager, call blocker, and, on top of that, sensor-base actions such as rejecting calls by turning the phone screen-down, and swipe gestures just to be sure you handle your phone any way you want to.Licensed users can link phone contacts to Facebook profiles, and use their HD profile pictures as call screens. Also with the License comes Ultimate SMS Screen, the name says it all.All this on the same package, working from Android V2.1 to ICS, on any resolution on any phone.There is no limit on the number of contacts you can personalize or block on the Free version. There are no adds and no timeouts. I believe on added functionality for value, not crippling the app to force buys.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/11/2014 05:17:00 pm